Oke osimiri Arabian: njirimara, nhazi, ụdị ndu na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ime oke osimiri nile di na Oke Osimiri Indian nile anyi nwere oké osimiri Arebia. A makwaara ya dịka Oke Osimiri Oman ma ọ bụ Oké Osimiri Arebia. Ọ bụ nnukwu mmiri nnu nke dị nnukwu mkpa akụ na ụba ebe ọ bụ ụzọ azụmahịa na-ejikọ Europe na mpaghara ndị India. Tupu akpọ ya Oke Osimiri Arebia, amaara ya aha ndị ọzọ dịka Oke Osimiri Peasia, Oke Osimiri Eritrea na Osimiri India.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị njirimara niile, nhazi, ụdị ndụ dị iche iche na egwu nke Oke Osimiri Arabian.
2 Ihu Igwe Oke Osimiri Arebia
3 Nhazi nke Oke Osimiri Arabian
4 Ihe dịgasị iche iche
O di na northwest nke Indian Ocean. Ọ dị n'akụkụ ọdịda anyanwụ site na Horn nke Africa na Arabian Peninsula na Yemen na Oman na nsọtụ ya, n'ebe ọwụwa anyanwụ site na mpaghara India, n'ebe ugwu site Pakistan na Iran, na ndịda site n'akụkụ nke Oké Osimiri India. Otu n’ime ihe ịmata n’oké osimiri a bụ na o nweghị agwaetiti dị n’etiti. Otú ọ dị, enwere ebe oke omimi kariri 3.000 mita.
Osimiri Indus bụ ihe kasị baa uru na-aga na mpaghara ya dum. Ọ bụ otu n’ime osimiri ndị dị mkpa inye mmiri n’oké osimiri a. Mpaghara ya gụnyere Gulf of Aden, Gulf of Khambhat, Gulf of Kutch, na Gulf of Oman, nke jikọtara ya na Persia Gulf site na Strait nke Hormuz. N'ime ahụ ndị a pere mpe, Gulf of Aden na Gulf of Oman bụ ngalaba ya kachasị mkpa.
Enye idịghe inyan̄ emi ekpride ke udomo, edi enye idịghe kiet ke otu akamba ke ererimbot. Mkpokọta Oke Osimiri Arebia ọ dị ihe dịka square kilomita 3.8. N'ebe ufodu, enwere miri miri emi nke n’enye aka mmepe nke ihe di iche-iche ma belata mmebi gburugburu ebe obibi. Ebe kacha mie emi n’oké osimiri niile bụ mita 4652. Mpaghara kachasị buru ibu na-edebanye aha ihe dị ka kilomita 2.400, ebe ọ bụ oke osimiri kacha obosara.
N'ihi njirimara ndị a, ọ ghọwo otu n'ime ụzọ dị mkpa nke Europe na mpaghara ala India.
Ihu Igwe Oke Osimiri Arebia
Anyị ga-akọwa ihu igwe dị ebe a. Anyị nwere ike ịkọwa otu ụdị ihu igwe sitere na ebe okpomọkụ ruo subtropical. Mmiri ya dị ọkụ nke na-enwe ebe etiti na-edeba ogo okpomọkụ nke ogo 25. Anyị maara na njirimara oke osimiri a na-emetụta oke ịdị adị nke mmiri mmiri. Oge udu mmiri bụ oge oke mmiri ozuzo na-ahapụkarị ọdachi akụ na ụba. Ihe kacha dị mma bụ na karịa ma ọ bụ obere n’etiti ọnwa Eprel na Ọktọba, ikuku na-ebido ịda na mpaghara ndịda ọdịda anyanwụ, ebe afọ ndị ọzọ ha na-efukarị na nke ọzọ.
Ọ bụ n'ime ọnwa ndị a niile akọwapụtara gburugburu ebe obibi. Ihe niile na-amalite site na jụrụ oyi nke oke osimiri. Otu ihe ahụ na-aga maka mgbanwe nke oke osimiri. Ma ọ bụ na ebili mmiri dị n’ọnwa ndị a n’afọ na-agbanwe agbanwe. A na-emepụta mpaghara nke obere oxygen Ọ bụ njirimara maka ịnwe oke ikuku oxygen na mpaghara oke osimiri. Ọnọdụ ndị a na-emepụta nguzobe nke nkwalite. Mbuli elu bụ mmiri nke ifufe na-ebugharị na-eburu nnukwu nri na-emetụta mpaghara Oman, Yemen na Somalia. N'ihi ntinye nke nri na njirimara ndị a, mpaghara ugwu nke oké osimiri jupụtara na ahịhịa na ahịhịa. Ọ bara ọgaranya karịsịa n'oge udu mmiri.
Nhazi nke Oke Osimiri Arabian
Ka anyị lee ihe bụ isi mere oke osimiri a. Mbube nke Oke Osimiri Arabian nwere njikọ na nke Oke Osimiri Indian. Tupu oke osimiri a, e nwere oke osimiri Tethys. Oke osimiri a bụ maka ikewapụ akụkụ nke Gondwana, na ndịda, na Laurasia, na ugwu, n'oge kachasị oge Mesozoic. Nke ahụ bụ mgbe a na-eche na n'oge Jurassic na mbubreyo oge ndị Cretaceous Nke a bụ mgbe Gondwana malitere iberibe ma mepụta ihe a maara taa dịka Africa na India.
N'ebe ọzọ, na ngwụcha Cretaceous Madagascar na India kewapụrụ kpamkpam. N'ihi nke a, Oke Osimiri Indian nwere ike ịbawanye ohere ya na Oke Osimiri Arabia malitere ịkpụzi n'ebe ugwu. Ihe a nile mere ihe dịka otu narị nde afọ gara aga. N'oge ahụ, India na-agba ọsọ ọsọ ihe dịka 100 centimeters kwa afọ na ntụziaka Europe.
Ihe dịgasị iche iche
Oké osimiri a abughi nani uzo nke Europe na India, ma o nwekwara otutu ihe di iche iche. Ọ nwere nnọọ mgbanwe ihu igwe ruru ọdịiche dị iche iche dị n'etiti ala na mmiri. Mgbanwe a na ọnọdụ okpomọkụ na ọdịiche na-aga n'ihu bụ ihe na-eme ka monsoons na-emepụta. E nwere ụdị ebe obibi mmiri dị iche iche n’ime oke osimiri a dịka akuku coral, ahịhịa ahịhịa mmiri, mangroves dị n’akụkụ mmiri na ụsọ mmiri, tinyere ndị ọzọ. Ebumnuche ndị a niile abanyela n'ụlọ nke ọtụtụ ụdị azụ na azụ mmiri.
A na-anọchi osisi ndị na-acha uhie uhie, aja aja na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ algae. Osisi anaghị eto eto. Anụmanụ ahụ bụ ihe ngosi dị egwu karị. Ọ na-adịgide site na nri nri nke malitere na plankton na ọ na-amalite site na nkwalite ndị ahụ anyị kwuru n'elu. A na-eme mmelite ndị a n’oge udu mmiri ma na-enye aka mee ka mmiri ahụ zụọ nri afọ ndị ọzọ.
N'etiti ụdị anụmanụ a ma ama, anyị nwere azụ azụ, ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ, Hawksbill turtle, barracuda, azụ ụmụ nwanyị, azụ azụ, sperm whale, orca, lobsters, crabs na dolphin ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, anyị ga-ahụ iyi egwu nke oke osimiri a dịka ọ bụ ụzọ azụmahịa azụmahịa dị mkpa n'etiti Europe na Eshia. Nyere na ọtụtụ ụgbọ mmiri na-agafe ebe ndị a, o doro anya na enwere nsogbu nke ihe egwu gburugburu ebe obibi sitere na ọrụ ndị a mmadụ. Mmanụ mmanu emebiwo ahụike ma gbuo ọtụtụ anụmanụ gụnyere oke mmiri. Mmebi dị n'oké osimiri a na-abawanye oge ọ bụla ebe ọ bụ na ọtụtụ ụgbọ mmiri bụ ndị na-agafe mmiri ndị a.
N'aka nke ọzọ, ịkụ azụ na-arụgide mmiri dị iche iche nke mmiri dị ukwuu. A naghị arụ ya mgbe niile n'ụzọ ga-adigide ma ụzọ ijide ya nwere ike ịgụnye igbu azụ na mberede ma ọ bụ mebie gburugburu ebe obibi.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Oke Osimiri Arabian na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Oke Osimiri Arebia